राती अबेर खाना खानुहुन्छ ? यस्ता रोग लग्न सक्छ। खाना खादा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ?
ramkrishna January 19, 2021	राती अबेर खाना खानुहुन्छ ? यस्ता रोग लग्न सक्छ
Previous Previous post: दुधसँग खान नहुने १२ खानेकुराहरु जसका बारेमा थाहा नपाएर हामी बिरामी हुन्छौ
Next Next post: ब्लु चिप सेयर के हो त ? के ब्लु चिप सेयर आँखा चिम्लेर किन्दा हुन्छ त ?